ब्राजिंग र वेल्डिंग प्रक्रिया टेक्नोलोजीहरूको साथ धातुमा सम्मिलित हुँदै
वेल्डिंग, ब्रेजि several र सोल्डरिंग सहित धातुहरू जोड्नका लागि धेरै विधिहरू उपलब्ध छन्। वेल्डिंग र ब्रेजिनिंग बीच के फरक छ? ब्रेजि and र सोल्डरिंग बीच के भिन्नता छ? भिन्नता प्लग तुलनात्मक लाभका साथै आम अनुप्रयोगहरूको अन्वेषण गरौं। यो छलफलले धातुलाई जोड्ने सम्बन्धमा तपाईंको बुझाइलाई मद्दत गर्दछ र तपाईंको अनुप्रयोगको लागि अधिकतम दृष्टिकोण पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी ब्राजिंग कार्यहरू
A ब्रेज्ड संयुक्त वेल्डेड जोइन्टबाट पूर्ण रूपमा भिन्न तरीकाले बनाइएको हुन्छ। पहिलो ठूलो भिन्नता तापमानमा छ - ब्रेजिंग आधार धातुहरूलाई पिघाउँदैन। यसको मतलब ब्राजिंग तापमान बेस धातुको पिघलने बिन्दुहरू भन्दा कम हुन्छ। ब्राजिंग तापमान कम उर्जा प्रयोग गरेर समान आधार धातुहरूको लागि वेल्डिंग तापमान भन्दा पनि कम कम छ।
यदि ब्रेजिंगले आधार धातुहरूलाई फ्यूज गर्दैन भने, कसरी तिनीहरूसँग मिल्दछ? यसले पूरक धातु र दुई धातुको सतहहरू जोड्दै जानेहरूको बीचमा धातुइ सम्बन्ध बनाएर काम गर्दछ। यो बन्धण सिर्जना गर्न फिलर धातु संयुक्त मार्फत कोरिएको सिद्धान्त केशिका कार्य हो। एक ब्रेजिंग अपरेशनमा, तपाई बेस धातुहरूमा व्यापक रूपमा तापक्रम लागू गर्नुहुन्छ। फिलर धातुलाई तातो अंशहरूको सम्पर्कमा ल्याइन्छ। यो तत्काल बेस धातुहरूमा तातोले पग्लन्छ र संयुक्त मार्फत पूर्ण रूपमा केशिका कार्यद्वारा कोरिन्छ। यो कसरी ब्रेज गरिएको संयुक्त बनेको छ।
ब्रेजि applications अनुप्रयोगहरूमा इलेक्ट्रोनिक्स / इलेक्ट्रिकल, एयरोस्पेस, मोटर वाहन, HVAC / R, निर्माण र अधिक समावेश छ। उदाहरणका लागि वातानुकूलन प्रणालीबाट अटोमोबाइलका लागि अत्यधिक संवेदनशील जेट टर्बाइन ब्लेडहरू स्याटेलाइट कम्पोनेन्टबाट उत्तम गहना सम्मका हुन्छन्। ब्राजिंगले एप्लिकेसनमा महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्दछ जसमा तांबे र इस्पातको साथसाथै टंगस्टन कार्बाइड, एल्युमिना, ग्रेफाइट र हीरा जस्ता गैर-धातुहरू समावेश गर्ने भिन्न आधार धातुहरू सम्मिलित हुन आवश्यक पर्दछ।
तुलनात्मक लाभ। पहिलो, एक ब्रेज्ड संयुक्त एक मजबूत संयुक्त छ। एक राम्रोसँग बनाईएको ब्रेज्ड जोइन्ट (जस्तै वेल्डेड जोइन्ट) धेरै केसहरूमा धातुहरू सामेल हुने भन्दा बलियो वा बलियो हुन्छ। दोस्रो, संयुक्त लगभग ११1150० डिग्री सेल्सियसदेखि १ 1600०० डिग्री सेल्सियस (620२० डिग्री सेल्सियस 870० डिग्री सेल्सियस) को बीचको तुलनात्मक रूपमा कम तापमानमा बनेको हुन्छ।
सब भन्दा महत्वपूर्ण, बेस धातु कहिल्यै पग्लँदैन। किनकि बेस धातुहरू पग्लिएका छैनन्, तिनीहरूले प्राय जसो उनीहरूको भौतिक गुणहरू राख्न सक्दछन्। यो आधार धातु अखण्डता सबै पातलो जोडी को विशेषता हो, दुबै पातलो र मोटा-सेक्सन जोड्ने सहित। साथै, तातो तापले धातुको विकृति वा वार्पिंगको खतरालाई कम गर्दछ। यो पनि विचार गर्नुहोस्, त्यो कम तापक्रमलाई कम गर्मी चाहिन्छ - महत्वपूर्ण लागत बचत कारक।
ब्राजिंगको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा फ्लक्स वा फ्लक्स-कोरड / लेपित एलोयहरू प्रयोग गरेर भिन्न धातुहरूमा सामेल हुनुको सहजता हो। यदि तपाईंसँग आधार धातुहरू पिघलनु आवश्यक छैन भने, तिनीहरूसँग फरक फरक पग्लि points पोइन्टहरू छन् भने फरक पर्दैन। तपाईं स्टिल को स्टिल को रूप मा सजिलै स्टील को स्टिल को रूप मा सजीलो गर्न सक्नुहुन्छ वेल्डिंग फरक कथा हो किनभने तपाईंले फ्यूज गर्नका लागि आधार धातु पिघल गर्नु पर्छ। यसको मतलब यो छ कि यदि तपाइँ तामा (पिघलने बिन्दु १ 1981 1083१ ° एफ / १०2500 डिग्री सेल्सियस) लाई स्टिलको लागि (पग्लि point पोइन्ट २ 1370०० / एफ / १XNUMX°० डिग्री सेल्सियस) वेल्ड गर्न कोशिस गर्नुहुन्छ भने तपाईले परिष्कृत र महँगो वेल्डिंग टेक्निकहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। पारम्परिक ब्रेजिंग प्रक्रियाहरू मार्फत असमान धातुहरूमा सम्मिलित हुने कुल सहजताको मतलब तपाईले जुनसुकै धातु पनि असेंब्लीको समारोहको लागि उपयुक्त छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईंलाई पनी गाह्रो तापक्रममा फरक भए पनि उनीहरूसँग सामेल हुन कुनै समस्या हुँदैन।
साथै,aब्रेज्ड संयुक्त एक चिकनी, अनुकूल उपस्थिति छ। त्यहाँ रात र दिनको तुलनामा ब्रेज्ड जोइन्टको सानो, सफा फिललेट र एक वेल्डेड जोड्को बाक्लो, अनियमित मोतीको बीच हुन्छ। यो विशेषता विशेष गरी उपभोक्ता उत्पादनहरूमा जोड्नेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ उपस्थिति महत्वपूर्ण छ। कुनै ब्रेज गरिएको जोइन्ट जहिले पनि "जस्तो छ" प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुनै परिष्करण कार्यहरू बिना नै आवश्यक पर्दछ - अर्को लागत बचत।
ब्राजिंगले वेल्डिंगमा अर्को महत्वपूर्ण फाइदा प्रदान गर्दछ जुन अपरेटरहरूले सामान्यतया वेल्डिंग सीपहरू भन्दा तेज ब्रेजि skills सीपहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। कारण दुई प्रक्रियाहरू बीचको अन्तरनिहित भिन्नतामा निहित छ। एक रैखिक वेल्डेड संयुक्त तापक्रम अनुप्रयोगको सटीक समक्रमण र फिलर धातुको बयानको साथ पत्ता लगाउनु पर्छ। अर्कोतिर, एक ब्रेज्ड संयुक्त, केशिका कार्य मार्फत "आफैं बनाउँछ"। वास्तवमा, ब्राजिंगमा संलग्न सीपको पर्याप्त अंश संयुक्तको डिजाईन र इन्जिनियरि inमा जडित छ। अत्यधिक कुशल अपरेटर प्रशिक्षणको तुलनात्मक गति महत्त्वपूर्ण लागत कारक हो।
अन्तमा, धातु ब्रेजिंग स्वचालित रूपमा तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। ब्रेजि process प्रक्रियाको विशेषताहरू - फ्यान ताप अनुप्रयोगहरू र पूरक धातु स्थिति सहजता - समस्याहरूको सम्भाव्यता हटाउन मद्दत गर्दछ। त्यहाँ संयुक्तलाई स्वचालित तवरले धेरै तरिकाहरू, ब्राजिंग फिलर मेटलका धेरै प्रकारहरू र तिनीहरूलाई त्यहाँ जम्मा गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् ताकि ब्रेजिंग अपरेसन सजिलै उत्पादनको कुनै पनि स्तरको लागि स्वचालित गर्न सकीन्छ।
वेल्डिंग धातुहरूलाई पग्लन्छ र सँगै फ्यूज गर्दछ, सामान्यतया वेल्डिंग फिलर मेटलको थप साथ। उत्पादित जोर्नीहरू कडा हुन्छन् - सामान्यतया धातुहरू सामेल हुने जत्तिकै बलियो, वा अझ बलियो। धातुहरू फ्यूज गर्न, तपाईं संयुक्त क्षेत्रमा सीधै ताप प्रयोग गर्नुहुन्छ। आधार तापकरहरू (धातुहरू जोडिन लागेको) र फिलर धातुहरू पग्लनको लागि यो ताप उच्च तापक्रमको हुनुपर्दछ। त्यसकारण, वेल्डिंग तापमान आधार धातुको पिघलने बिन्दुमा शुरू हुन्छ।
वेल्डिंग सामान्यतया ठूला सम्मेलनहरूमा सामेल हुन उपयुक्त छ जहाँ दुबै धातु वर्ग तुलनात्मक रूपमा बाक्लो छन् (०. 0.5 "/ १२..12.7 मिमी) र एकल बिन्दुमा सामेल भयो। एक वेल्डेड संयुक्त को माला अनियमित छ, यो सामान्य रूपमा सौंदर्य प्रसाधन जोडे को आवश्यक उत्पादनहरु मा प्रयोग गरीदैन। अनुप्रयोगहरूमा यातायात, निर्माण, निर्माण र मर्मत पसलहरू सामेल छन्। उदाहरणका लागि रोबोट सम्मेलनहरू र दबाव जहाजहरू, पुलहरू, भवन संरचनाहरू, विमानहरू, रेलवे कोचहरू र ट्र्याकहरू, पाइपलाइनहरू र अधिकको बनावट हुन्।
तुलनात्मक लाभ। किनभने वेल्डिंग तातो गहन छ, यो सामान्यतया स्थानीयकृत र pinpointed छ; यो एक व्यापक क्षेत्र मा एक समान लागू गर्न व्यावहारिक छैन। यस पिनपाइन्ड पक्षका यसको फाइदाहरू छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाई एकल बिन्दुमा धातुको दुई साना पट्टिहरुमा सामेल हुन चाहानुहुन्छ भने, विद्युतीय प्रतिरोध वेल्डिंग दृष्टिकोण व्यावहारिक छ। यो एक द्रुत, आर्थिक तरीका हो सयौं र हजारौं द्वारा बलियो, स्थायी जोड्ने बनाउन।
यदि संयुक्त लिp्क नभएको भन्दा रैखिक हो भने, समस्याहरू खडा हुन्छन्। स्थानीयकृत वेल्डिंग गर्मी एक नुकसान हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं धातुको दुई टुक्रा बट-वेल्ड गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले धातुको टुक्राहरूको किनारा बेवेल गरेर सुरू गर्नुहुनेछ वेल्डिंग फिलर मेटलको लागि कोठा। त्यसपछि तपाइँ वेल्ड गर्नुहुन्छ, पहिले संयुक्त क्षेत्रको एक छोरलाई पिघलने तापक्रममा तताउँदै, त्यसपछि बिस्तारै तापक्रम संयुक्त रेखासँगै सार्न, तापक्रमको साथ सिंक्रनाइजमा फिलर मेटल जम्मा गर्दछ। यो एक विशिष्ट, पारम्परिक वेल्डिंग अपरेशन हो। राम्रोसँग बनाइएको, यो वेल्डेड संयुक्त कम्तिमा पनि धातुहरू जोडिएसम्म बलियो छ।
यद्यपि यस रेखात्मक-संयुक्त-वेल्डिंग दृष्टिकोणमा हानिहरू छन्। जोर्नीहरू उच्च तापमानमा बनेका छन् - दुवै बेस धातुहरू र फिलर धातु पिघल्न पर्याप्त उच्च। यी उच्च तापक्रमले समस्याहरूको कारण हुन सक्छ, सम्भावित विकृति र आधार धातुको वार्पिंग वा वेल्ड क्षेत्र वरिपरि तनाव सहित। यी जोखिमहरू कम हुन्छन् जब धातुहरू जोडिएका हुन्छन् मोटा, तर ती समस्याहरू हुन सक्छन् जब आधार धातुहरू पातलो भाग हुन्छन्। साथै, उच्च तापक्रम महँगो हुन्छ, किनभने तातो ऊर्जा हो र ऊर्जाले पैसा खर्च गर्छ। अधिक गर्मी तपाईंले संयुक्त बनाउनको लागि, अधिक संयुक्त उत्पादन लागत लाग्नेछ।
अब, स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया विचार गर्नुहोस्। के हुन्छ जब तपाईं एक सभामा सामेल हुनुहुन्न, तर सयौं वा हजारौं सम्मेलनमा? वेल्डिंग, यसको प्रकृति द्वारा, स्वचालनमा समस्या प्रस्तुत गर्दछ। एकल बिन्दुमा बनेको रेसिस्टन्स-वेल्ड संयुक्त स्वचालित रूपमा अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ। जे होस्, एक पटक पोइन्ट लाइन - लाइनर संयुक्त - हुन्छ फेरि, रेखा ट्रेस हुनुपर्छ। यो ट्रेसिंग अपरेशन स्वचालित गर्न सम्भव छ, संयुक्त लाइनलाई सार्दै, उदाहरणका लागि, एक हीटिंग स्टेशन बितेको र फिलर तारलाई ठूलो स्पूलबाट स्वचालित रूपमा फीड गर्ने। यो एक जटिल र कठिन सेटअप हो, यद्यपि, जब तपाईंसँग ठूलो भागको समान उत्पादनको रनहरू मात्र आवाश्यक हुन्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि वेल्डिंग टेक्निकले लगातार सुधार गर्दछ। तपाईं इलेक्ट्रोन बीम, कप्यासिटर डिस्चार्ज, घर्षण र अन्य विधिहरू मार्फत उत्पादन आधारमा वेल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यी परिष्कृत प्रक्रियाहरू प्राय: विशेष र महँगो उपकरण प्लस जटिल, समय खपत सेटअपहरूको लागि कल गर्दछ। विचार गर्नुहोस् कि यदि तिनीहरू छोटो उत्पादन रनको लागि व्यावहारिक छन्, असेंब्ली कन्फिगरेसनमा परिवर्तन वा विशिष्ट दिन-प्रति-दिन मेटल आवश्यकताहरू।
दायाँ धातु जोडिने प्रक्रिया छनौट गर्दै
यदि तपाईंलाई दुबै स्थायी र कडा जोडहरू आवश्यक छ भने, तपाईं सम्भवतः वेल्डिंग बनाम तपाईंको धातुलाई जोड्ने विचारलाई कम गर्नुहुनेछ ब्राजिंग। वेल्डिंग र ब्रेजिंग दुबै गर्मी र फिलर धातुहरू प्रयोग गर्दछ। ती दुबै उत्पादनको आधारमा गर्न सकिन्छ। जे होस्, समानता त्यहाँ समाप्त हुन्छ। तिनीहरू फरक तरीकाले काम गर्छन्, त्यसैले यी ब्राजिंग बनाम वेल्डिंग विचारहरू सम्झनुहोस्:
बेस धातु वर्गहरूको मोटाई
स्पट वा लाइन संयुक्त आवश्यकताहरू
धातुहरू सामेल भइरहेको छ
अन्तिम विधानसभा मात्रा आवश्यक छ
अन्य विकल्पहरू? मेकानिकल तवरले जोड्ने जोडीहरू (थ्रेडेड, स्टेक्ड वा रिभेट गरिएको) सामान्यतया ब्रेज्ड जोर्नीहरूसँग शक्ति, आघात र कम्पनको प्रतिरोध, वा चुहावट कडासँग तुलना गर्दैन। चिपकने बन्धन र सोल्डरिंगले स्थायी बन्धन प्रदान गर्दछ, तर सामान्यतया, न त एउटा ब्रेज गरिएको संयुक्तको बल प्रदान गर्न सक्छ - जस्तै बेस बेस आफैंको भन्दा ठूलो। न त तिनीहरू, एक नियमको रूपमा, जोड़हरू उत्पादन गर्न सक्छन् जुन २०० डिग्री सेल्सियस (° ° डिग्री सेल्सियस) माथिको तापमान प्रतिरोध प्रस्ताव गर्दछ। जब तपाईंलाई स्थायी, मजबूत धातु-देखि-धातु जोइन्टहरू चाहिन्छ, ब्रेजिंग एक कडा दावेदार हो।
विभाग टेक्नोलजीज ट्याग ब्राजिंग, ब्रेजिंग संयुक्त, कसरी ब्रेजि work काम, कसरी वेल्डिंग काम, प्रेरण ब्रेजिंग धातु, प्रेरण जोड्ने धातु, जोड्ने ब्रेजि, जोडिने वेल्डिंग, धातु ब्रेजिंग, धातु ब्रेजिंग हीटर, धातु प्रेरण ब्रेजिंग, धातु वेल्डिंग, धातु वेल्डिंग हीटर, वेल्डिंग मेल अन्वेषण